Lehilahy Mitety Izao Tontolo Izao Tsy Hijery Fa Hihaino · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2015 7:24 GMT
Jacob Kirkegaard mandrakitra am-peo ny faritra miavaka ao Chernobyl: “Karazana tsy toerana tsy faleha izany araka ny eritreritro: Ahoana no ahafahako mandrakitra am-peo toerana tahaka izao satria ny fahatongavako no… manova zavatra betsaka?” Sary: Jacob Kirkegaard
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Alina Simone ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 28 Septambra 2015, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty-.
Miaiky aho fa betsaka ny itovizako amin'ny mpanakanto Danoà Jacob Kirkegaard: mampiasa fandraisam-peo aho, mampiasa fandraisam-peo izy. Tia feo aho, tia feo izy.
Mampiasa fandrefy hafainganana i Kirkegaard mba handrakitra ny ambanin'ny tany, mampiasa hidrôfonina handraisana ny feo any ambanin'ny rano, ary mampiasa mikirôfonina bitika mihitsy aza mba handraketana feo madinika avy amin'ny sofin'olombelona.
Ary tena tia feo bebe kokoa noho izaho izy.
“Tsy mbola nandray zava-mahadomelina ny tenako manokana, satria mihevitra indrindra aho fa afaka mitondra ahy ho avo kokoa ny feo. Nampiasa feo hatrany aho hitondra ahy eny amin'ny toerana isan-karazany, “hoy i Kirkegaard.
Nanomboka tamin'izy 6 taona ny diany raha nanome fandraisam-peo azy ny rainy ary nahita izy fa afaka mikirakira ny feony amin'ny fampiadanana izany: “Ary nahatonga ahy ho toy ny olon-doza tampoka izany. Tahaka ny vampira goavambe. “
Taorian'ny fianarana tany amin'ny kolejy, nandany ny fotoananyho mpiangaly mozika i Kirkegaard. Indray andro, nametraka tampoka ny sofiny tamin'ny fefy vy tany Cologne, Alemaina izy, ary tafiditra tao anatin'ny tontolon'ny mozika hafahafa sy tsy mahazatra:
Izany no nahafantaran'i Kirkegaard fa raha tokony hamoaka feo dia aleony mahita feo “izay somary mahatafiditra ahy amin'ny misitery, izay tsy takatro loatra. Mety hoe toerana mavesatra ara-politika tiako hohenoina izany, fa tsy mikasa haneho ny hevitro aho. “
Nandany ny herinandrony tao anaty sambo kely tao amin'ny Ilulissat Icefjord ao Giroenilandy izy, mandrakitra am-peo ny vongan-dranomandry. Ity ny feonkiran'ny fiakaran'ny maripanan'ny tany ankapobeny :
Manoro hevitra i Kirkegaard: “Ampiasao ny toho-pihainoana (écouteur) na ny fandobo-peo tsara.” Marina ny azy: Na dia ao anatin'ny trano fisotroana kafe feno olona aza, nentina tany amin'ny toerana sady voaràra no tsy misy lamina aho.
“Indraindray aho mihevitra fa tsy ampy ny mamaky fotsiny na mahita sary fotsiny ireo ranomandry be dia be amin'ny vongan-dranomandry izay nanjavona mandritra ny taona maromaro. Fa raha mahare ianao, manomboka mahatsapa ianao fa mitranga amin'izao fotoana izao izany, “hoy i Kierkegaard.
Mikasika izay tsy mitranga ankehitriny ihany koa ny asany – indrindra ao amin'ireo toerana adino; ohatra, ny tanànan'i Pripyat, ao afovoan'ny “faritra tsy azo idirana” fa tratran'ny fanelatra (radioactive) ao Chernobyl .” Nandrakitra am-peo tao i Kirkegaard tamin'ny taona 2005.
“Tena lasa avokoa ny olona, ary mbola misy ireo sori-piainana maro dia maro. Karazana toerana tsy faleha izany ary nieritreritra aho : Ahoana no ahafahako handrakitra ny toerana tahaka izany, satria ny fahatongavako – nanova zavatra betsaka?”
Ka nametraka ny fanamafisam-peony izy – ary lasa.
Isaky ny mandray feo izy, dia mbola te handrakitra hatrany, tamin'ity indray mitoraka ity ihany no ambany haavom-peo noraiketina, namadika ny fahanginana ho samonimonin-tantelilahy.
Saingy miziriziry tanteraka ny toerana sasany hanome ny tsiambaratelon'izy ireo, hitan'i Kirkegaard izany raha niezaka nandrakitra ny sakana mivaingana izay manasaraka an'i Isiraely amin'ny Morondrano Andrefana izy.
“Tena mavesatra tokoa, satria tsy misy feo loatra. Saingy avy eo tsy maintsy manontany tena aho: Inona tokoa moa no antenaiko? “Hoy izy. “Hitanao, ny tsy hiray feo amin'ny manodidina indrindra no toetran'ity rindrindra ity. Ny hanajanona izay mety ho ako. Ary midika zavatra rehefa manomboka ho takatro izany … izay no raketiko. “
Farany napetrany manerana ny rindrina ihany ny mikirôfonina, mandrakitra ny feon'ny fiainana eo am-pivoarana – antso hivavaka, fiara mandeha mora – feo tsy tafajanon'ny rindrina.
Tsy fanehoan-kevitra ara-politika avokoa ny asan'i Kirkegaard, ary tsy irery koa izy tamin'izany. Efa nanasa vahiny 16 samihafa tao amin'ny Hotel Marienbad ao Berlin izy indray andro ary nandrakitra am-peo azy ireo teo ampatoriana. Tsy dia misy zavatra betsaka re – fa olona miesona tsindraindray sy olona sasany matory mibitsibitsika. Nilaza i Kirkegaard fa karazana fitsorahana mankany amin'ny tontolon'ny tsy fantatra izany.
“Manome ahy tsiambaratelo izy ireo. Manasa ahy amin'ny toerany manokana tsy mahafantatra ny mombamomba azy ireo akory izy ireo“.
Koa ahoana raha te hanao ny lalaoko aho, nanontany an'i Kirkegaard aho, mpanao gazetin'ny onjam-peo lasa “Artistan'ny Feo”. Aiza no mety ahitako fandrefy hafainganana tsara efa nampiasaina? Saingy nilaza tamiko izy fa tsy resaka fitaovana raitra izy io; fa izay hevitrao.
“Tahaka ny nolazain'ilay Mpiasa [Dale] Cooper tamin'ny [ fandaharana amin'ny fahitalavitra] Twin Peaks: ‘Tsy araka ny fahitana azy ny vorondolo.” Izany no tsongan-teny tena tiako eo amin'ny lafiny feo – fa tsy araka ny fiheverana azy ny feo.
Zavatra iray hafa nolazain'ny Cooper ihany koa ny hoe: “Tsy fantatro mihitsy izay itondran'izy ity [ahy] … saingy manana fahatsapana mazava aho fa ho toerana mahafinaritra sady hafahafa izany.”